Nilaza ny mpitantana ny Apple fa sarotra hadino i Siri Remote | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny nanombohan'ny Apple TV 4K ny taranaka faharoa, araka ny fanamarihan'ny tsaho marobe, Apple dia nanamboatra ny Siri Remote na izany aza, tsy nampiany ny lahadin'ny Fikarohana, asa iray izay ho an'ny mpampiasa maro no tena ilaina rehefa mitady ny lavitra eo anelanelan'ny kidoro amin'ny sofa isika.
Na izany aza, ho an'ny mpanatanteraka Apple Tim Twerdahl, ity asa ity dia tsy tafiditra satria satria matevina kokoa dia sarotra kokoa ny very mora foanasatria tsy mivezivezy amin'ny sisin'ny sofa. Satria sarotra kokoa ny very, io lahasa io dia tsy laharam-pahamehana amin'ny fampandrosoana ny Siri Remote vaovao, hoy ny fampitam-baovao. MobileSyryp.
Tsy fantatro izay karazana sofa Apple tompon'andraikitra, fa toa ahy, azoko antoka fa maro aminareo very tsy mahafehy ny fahitalavitra koa ianao izay matetika loatra ary ity raha malalaka kokoa sy lava kokoa noho ny Siri Remote an'ny Apple TV +.
Miaraka amin'ny fanovana nataonay tamin'ny Siri Remote - ao anatin'izany ny fanaovana azy ho matevina kely kokoa mba tsy hianjera be eo amin'ny sezalà fandriana - izany no ilana an'ireo fitaovana tambajotra hafa rehetra hahitana azy toa kely kokoa.
Ny anton'ny fanovana ny famolavolana Siri Remote dia satria i Apple no kendrena manolotra traikefa manankarena ny olona ao an-trano satria samy miova ny karazana atiny sy ny fomba idiran'ny olona azy ireo.
Tsapanay fa satria maro ny olona no nifindra tany amin'ny Apple TV ho fitaovana voalohany hijeren'izy ireo atiny amin'ny fahita lavitra amin'ny televiziona, ny fananana ny remote izay nanao izany rehetra izany amin'ny famadihana sy ny famonoana ilay rafitra dia zava-dehibe, koa tianay koa ny manampy izany . Fantatray fa misy vondron'olona mpanjifa efa lehibe niaraka tamin'ny fanaraha-maso dimy lalana (ambony, ambany, havia ary havanana) ary mahazo aina amin'izy ireo. Fantatray fa misy hery lehibe hanodinana, fa nieritreritra izahay angamba fa ny zavatra nanolotra ny tsara indrindra tamin'ny tontolo roa dia fomba iray tsara hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa.
Ny Siri Remote vaovao dia nanala ny gyroscope sy ny hafainganam-pandeha tafiditra ao amin'ireo kinova taloha ka tsy afaka mampiasa azy intsony hankafizinay lalao. Twerdahl dia nilaza fa raha te hilalao amin'ny Apple TV ianao, bokotra fanaraha-maso no hanolotra anao ny traikefa tsara indrindra.
Amin'io lafiny io, mandritra ny andro vitsivitsy, ny DualSense ho an'ny PS5 dia misy ao amin'ny Apple Store izao. Hatramin'ny lafiny sasany dia azoko tsara fa ny Apple dia tsy mamoaka lalao Contrôtôla natokana ho an'ny Apple TV + satria tsy io no tena fampiasany azy, fa esory ny gyroscope sy ny accelerometer avy any amin'ny lavitra, Toa ahy io filalaovana tsiro ratsy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Nilaza ny tompon'andraikitra iray ao Apple fa sarotra hadino ny Siri Remote
Olana amin'ny Siri Remote vaovao amin'ny Apple TV 4K